मानिसको यौनजीवनलाई नै तहसनहस पारिदिने के हो यौन दुर्बलता ? | Rajmarga
मानिसको यौनजीवनलाई नै तहसनहस पारिदिने के हो यौन दुर्बलता ?
यौन दुर्बलताको उपचारको सफलता त्यसका पछाडि अन्तरनिहित कारणहरुको पहिचानमा भर पर्दछ । यससँग जोडिएका समस्याहरुलाई पहिचा गरियो भने त्यसलाई सही ढंगले निको पार्न सकिन्छ । डर, तनाव र चिन्तासँग जोडिएका मध्यम खालका यौन दुर्बलताहरुलाई सम्बन्धित विज्ञसँगको परामर्श, शिक्षाका मद्दतले अनि आफ्ना पार्टनरसँग गरिने खुलस्त कुराकानीले सफलतापूर्वक निको पार्न सकिन्छ । स्रोतः https://my.clevelandclinic.org
Previous post: पाकिस्तानमा कोइलाखानीका ११ मजदुरको अपहरणपछि हत्या